Ogo mmiri maka ogbugba mmiri n'ubi
site ha na 20-06-06
Mmiri mmiri na njirimara ya na-emetụta uto nke ahịhịa, usoro ala yana sistemụ mmiri n'onwe ya. Ogologo mmiri mmiri na-ezo aka na nke anụ ahụ na nke kemịkal, ma ọ bụ karịa na nkọwapụta nke ịnweta mmiri na ọnụnọ o ...
Anyị gosipụtara dị ka ndị ngosi na 123rd Spring Canton Fair. Na saịtị ngosi ahụ, anyị natara karịa ụlọ ọrụ 30 na ndị ahịa si Middle East, India, Egypt, Europe na China. Na mkparịta ụka ahụ, ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ enwetawo ihu ọma nke ndị ahịa na ọnụahịa magburu onwe ya ma dị elu ...
Emegharịrị ụlọ ọrụ ọhụụ anyị na May 2015, nke kpuchiri ala 20,000 ㎡. Lọ ndị ahụ gụnyere mmepụta, ụlọ nkwakọba ihe, na mpaghara ọfịs, yana ebe obibi. Onwe ya na igwe di elu na njikwa ruru eru, Greenplains nwere obi ike izute nsogbu ndị ka elu, ma mepụta ọdịnihu dị mma.